May 2020 | Londoloza Isitimela
Inyanga: May 2020
Ikhaya > May 2020
Ukuhlala usesimweni ngenkathi uhambela ngaphandle kokungabaza kuyinselele. Ukudla okulingayo kuhlala kunikezwa. Lokhu kuhlangene nekhefu kwendlela yakho ejwayelekile yokuzivocavoca evame ukuholela ekuweni kwenqola yokuqina. Ngakho-ke umuntu uhlala kanjani elungile ngenkathi ehamba? Kuyinto…
Ingabe wake wazibuza ukuthi kunjani ukuba jamela, uwakhiphe woke, ngaphandle namafasitela amakhulu isithombe njengoba Whirls izwe? Kunjani kokuba lasenza nokulala nge ukuzamazamisa okusimeme isitimela njengoba trundles phansi ithrekhi? Ukuhamba ngezitimela kuvame kakhulu…